Barattooti Qophaa’ina Biiftuu,Dargee Qophaa’ina NaqamteeHiriira FXG Bahaniin “Abbaan Biyyaa Oromoo” Dha Jechuun Gootummaan Waraana Wayyaanee Dura Dhaabbachaa Oolan. | QEERROO
29 thoughts on “Barattooti Qophaa’ina Biiftuu,Dargee Qophaa’ina NaqamteeHiriira FXG Bahaniin “Abbaan Biyyaa Oromoo” Dha Jechuun Gootummaan Waraana Wayyaanee Dura Dhaabbachaa Oolan.”
qeerransa madaa'e on February 3, 2016 at 9:08 am said:
Aanaa haroo limmuu keessatti bakka tikishuu jedhamutti waraana wayyaanee nama 4 irratti tarkanfiin du’aa gaafa guyyaa 01/02/2016 fudhatameera. Akkasumas guyyaa gaafa 02/02/2016 waraana wayyaanee namoota 14 irratti tarkaanfiin du’aa fi namoota 9 irratti immoo madaa’uu fi meeshaan 120 fi boombiin 8 irraa booji’ameera.
qeerransa madaa'e on February 4, 2016 at 11:33 am said:
godiina wallaga bahaa aanaa nuunnuu qumbaa keessatti goototni qeerroo uummata oromoo fi uummata naannoom adareen 23/05/08 tarkaanfii konkolaataa bulchiinsaa irratti fudhatameera. Humni agaazii fi faxinoon jaarsolii fi jaartolii biyyaa irratti darara irratti fudhachuun mana ba’aniillee baqachuu kan hin dandeenye waan ta’eef walitti qabanii ukkee(awwaara)konkolaataa irra ciibsanii namummaan ala akka gangalatan godhanii mana hidhaatti guuraa jiru. Kana malees kan danda’e qe’ee isaa gadhiisee baqataa jira. agaazii fi Faxinoon mana konkolaachisaa Xilahuun Warqinaa kan jedhamu rasaasaan erga mancaasanii booda keessa dhaabbataanii uummatatti ukaasaa jiru. Qeerroon naannoo sanaa immoo tarkaanfii poolisii Nuuresaa Kadirii fi Kibirat jedhaman irraiti miidhaa cimaan irra ga’ee mana yaalaatti yaalamaa jiru.Ta’insoota suukkanneessaa fi ajaa’ibsiisaa ta’een utuu kanaan jiruu humni mootummaa bakka waraanni wayyaanee namootni 18 naannoo tikishuu jedhamutti ajjeefaman sana sababa godhachuudhaan namoota naannoo miisisuuf jecha pileeniin irra marsaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun Godiina wallagga Bahaa Aanaa Sibuu siree bakka Cingii jedhamutti mormii jabaan uummata oromoo naannoo sanaa fi qeerroo naannoo sanaa itti fufe jira.
goota biyyaa on March 17, 2016 at 2:32 pm said:
Godiina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa keessaa Namootni Daldaltoota ta’an humnootaa Agaaziitiin qabamanii man’s hidhaatti kan galfaman 1. Tafarraa Margaa 2.Margaa Jogooraa 3. Abarraa Qana’aa 4Addunyaa Asafaa yeroo ta’an baratoota kutaa 12ffaa kan ta’an 1. Daani’eel Gammachuu fi 2. Caalaa Tasfaayee irratti dararraan cimaan irra ga’aa jia.
Aanaa Eebantuu keessaa immoo hunootni adda I/A/I/G/Dhimma nageenyaa Aanaa Aanaa Getaachoo Xilahuun kan jedhamu gaafa guyyaa 13/03/2016 galgala ajjeefameera.
Goota Biyyaa on March 17, 2016 at 7:18 pm said:
Godinaa Wallaggaa baha Aanaa Diggaa keessaa ittii baratoota sadarkaa 1ffaa kollooboo fi Ifaa sadarkaa 2ffaa mormii FXG guyyaa 16_17/03/2016 ittii fufee jira .sababaa kanaan baratoota hedduu irratti reebichii fi hidhaan raawwatee jira.
sababaa kanaan B/SAA Masfiin Tasfaa jedhamuu qabaan achii buteen isaa dhjbamee jira.
akkasumaas baratoonii sadarkaa 1ffaa fi2ffaa mormii isaan ittii fufaan jiru.
waa’ee gargaaraa meeshaa kan duuraa isiin gaaffanee maal nuu jettaan? hojiin Saba baa kan nuu harkaatii laaffee jira.kanaaf too danda’amee kara bilbiilaa nuu beeksiisa.
qeerransa dhihaa irra.
gaadaan gaada biliisummaatti.
Injiifanoon uummataa OROMOOF.
Goota biyyaa on March 17, 2016 at 7:42 pm said:
Godiina Wallaggaa baha Aanaa Giddaa keessaa maqaan isaan gaditt tarreefamee hunootaa mootummaa(agazii ) karaa argiisuuun mama saboottotaa caccabsiisuun reebisiisaa jiru.isaaniis:1.Mokkonoon Ayyansaa 2.Ayyalaa Ejjeeree 3.Nagaasaa Dheereessaa 4.Daachaasaa Fiqaaduu.jedhamu.
qeerransaa dhihaa on March 19, 2016 at 1:49 pm said:
G/W/B/Aanaa Sibuu Siree keessaatti mormii m/b sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa godhaan irratti B/soota isiintuu jeqsiisaa jechuu baratoota duraattii jilbiifachiisaan guyyaa gaaffaa 18/03/2016 humnoonii agaziif pooliisii reebiichaa irrattii raawwataaniiru.
G/SH/Lixaa Aanaa Bakkoo Tiibbee keessattii mormii ka’een m/b Daanbii sadarkaa 1ffaa Darren 4 gubateera.
Aanaa Giddaa,Kiirammuu keessaattii mormiin FXG ittii fufee jira.
Qeerransa dhihaa on March 19, 2016 at 7:49 pm said:
Naannoo Beenshanguulii guumuuzii keessaattii bakka magaalaa yaasoo jedhamuuttii uummanii oromoo fi uummanii waliin ta’uu mootummaan wayyannee nuu him bulichituu jechuudhaan waliittii dabalamaanii guyyaa gaaffaa 18/03/2016 guyyaa gabaa kan irrattii diiddaa mormii isaanii dhagessiisaaniiru.
diiddaa kan irrattii jarsoolii karaa oromoo namootaa 200 karaa gumuzii immoo namoota 84 filachuun humnootaa agazii bakkaa saanaa ariihaniiru.kan boodee eenyuu illee uummatootaa kan waliittii buusuu akka him dandeenyee walii galaniiru.
kanaattii dabaluu karaa keessaa uummanii kuun akkaa tokkummaa isaanii kan caalaattii ittii fufaan dhamsaa gahaa akkaa nuu dabaarritaan maaqa qeerransaa dhihaan cimsiinee isiin gaaffana.
NB wa’ee meeshaa deegarsaa isiin gaaffataa turuun keenyaa beekamaadha .haata’uu maalee hojiin sababaa kanaan nuu harkattii laaffee jira.kanaaf karaa danda’aam akka nuu deegartaan maaqa qabsoo oromoottiin isiin gaaffana. INJIIFANNOON UUMMATAA OROMOOF.
goota biyyaa on March 19, 2016 at 7:53 pm said:
Qeerransa dhihaa on March 21, 2016 at 7:13 pm said:
bunch in a as to magaalaa naqamtee keessaattii garee hojeetootaa keessaa basaastootaa ta’anii sabontootaa dararraa jiraan:-
1.birhaanuu abashuu (i/g/s /s/bulchiisaa gaarii magaalaa naqamtee.
mulugetaa faayisaa (afaan yaa’ii b/m/naqamtee.
3.immiruu habtee (i/g/opdo b/m/naqamtee.
baay’ee sabontootaa kan dararraan:-
3.taddasaa urgeessaa(a/y/kantiibaa b/magaalaa calalaaqii.
4.zalalem adimaasuu(i/a/i/g/kantiibaa fi i/gijaarsaa imx.
5.wander xasoo(baratoota calallaqii irrattii hojeeta).
6.addunyaa guutamaa (d/t/kantiibaa bulchiisaa jaatoo.
7.gammachuu (gammee) garee buufataa fayyaa fi baratoota irrattii kan hojeetuudha.HB:- Birhaanuu Abashuu baratoota qopha’inaa irrattii hojjeta.
Goota biyyaa on March 21, 2016 at 7:16 pm said:
Qeerransa dhihaa on March 22, 2016 at 12:00 pm said:
Guyyaa haara magaalaa Naqamtee keessaattii m/b qopha’inaa Naqamtee,diibooraa sadarkaa 1ffaa ,m/b jaatoo sadarkaa 1ffaa fi Askiin sa’attii 5:00-7:00 mormii jabaan ittii fufee oleera.
humnoon agazii fi pooliisii daa’imaan irrattii fi ummatootaa naannoo irrattii gaasii namaa imimmaaneessuu fi dhukaasaa irrattii bananii namootaa baay’ee mana hidhaattii guuraniiru.
akkasummasii uummataa naannoo irrattii miidhaa sukkaneessaa raawwataniiru.
Qeerroon naannoo isaan yaalii mana hidhaa gubuuf yaalii guddaan ta’e ture gaaruu hin miikoofne.
injiifaanoon uummataa OROMOOF!!
goota biyyaa on March 22, 2016 at 12:02 pm said:
Qeerransa dhihaa on March 22, 2016 at 8:13 pm said:
G/W/baha Giddaa ayyaanaa keessaattii mormii FXG baratootaan taasiifamee irrattii barataa kutaa 11ffaa kan ta’e baratoota Biqilaa Dargee kan jedhamu humnootaa agaziin kan miidhamee lubbuun isaan kaleessaa galgalaa osoo hospitaalaa Naqamteettii yaalamaa jiru guyyaa gaaffaa21/03/2016 lafa kan irraa dabarteeti.
bakka inni ittii dhalattee guddatee gandaa qotee bulaa laliisaa keessati
kanaafuu gumaan barataa kan in baafana.
HB:- yeroo baay’ee akkumaa irra deedebiinee isiin barreessinuu dhimmaa gargaaraa meeshaa akka deebii atattama nuu laataan maaqa qabsoo oromoon isiin gaafaana. ykn karaa bilbiila nuu beeksiisuu ni dandeessu.qeerroon bakka kan jiru harkaa qulla ta’an jiru .
basaastoon waayyanee baay’ee wal ijaaraa jiru waan ta’eef soban nuutii ABO jechuu nuu birattii galma’aa bakkaa isaan jiraniitti isiin geessinaa jechuun baratoota hidhaattii guuraa jiru waan ta’eef eenyumaa nama isaan akka adda bafaataa dhamsaa atattatamaa akka walii dabarsaa dhamsaa ariifachiisaa akka nuu dabarsiitaan dhamsaa lammumaa dabarsiina.
goota biyyaa on March 22, 2016 at 8:18 pm said:
G/W/baha Giddaa ayyaanaa keessaattii mormii FXG baratootaan taasiifamee irrattii barataa kutaa 11ffaa kan ta’e barata Biqilaa Dargee kan jedhamu humnootaa agaziin kan miidhamee lubbuun isaan kaleessaa galgalaa osoo hospitaalaa Naqamteettii yaalamaa jiru guyyaa gaaffaa21/03/2016 lafa kan irraa dabarteeti.
qeerrans dhihaa on March 23, 2016 at 11:45 am said:
G/sh/l/Aanaa bakkoo tiibbe keessaattii basaastootaa nama lama osoo isaan motoraa isaanii adeemaa jiraan uummanii karaa ittii cufee osoo arii’aa jiran motoraa isaaniin boowwaa lixaanii du’aniiru.maaqsn isaan 1.Befiqaaduu Reedaanyii 2.Tasfaayee Kabadee kan jedhamaan guyyaa 22/03/2016 du’anii guyyaa 23/03/2016 awwalmaan .
G/w/b/Aanaa Limmuu gaaliilaa keessaattii bakka meexii mi’o jedhamuuttii guyyaa 22 03/2016 qeerroo naannoo sanaan wajjiirii gandaa gubatera.
Aanaa sibuu sireettii guyyaa 22/03/2016 fi Aanaa nuunnuu qunbaattii guyyaa 23 /03/2016 mormiin FXG ittii fufeera.
goota biyyaa on March 23, 2016 at 12:02 pm said:
qeerransa dhihaa on March 23, 2016 at 6:41 pm said:
magaalaa Naqamtee keessaattii FXG manneen barnoota ask ,kibba waachaa ,adiiveentiistii sadarkaa 1ffaa , calalaqii uummataa naannoon FXG ittii fufee jira.
G/w/B/Aanaa Giddaa ayyaanaa gandaa laliisee keessaa barataa agaziin ajjeefamee irrattii uummanii naannoo isaan gumaa kee ni baafnaa jechuun walii galaniiru.
goota biyyaa on March 23, 2016 at 6:43 pm said:
qeerransa dhihaa on March 24, 2016 at 7:10 pm said:
G/w/b/Aanaa nuunuu qunbaa keessaattii mormiin FXG baratoota fi uummataa naannoottiin ittii fufee jira.
mormiin isaaniis :-
B/SAA Taddasaa Hordofaa
bakka buustaan nuu fida,yoo ni du’e ta’e reeffaa isaan nuu keena, yoo jira ta’e seerattii haadhiyyatu fi bakka inni jiru maatii isaaf uummataa naannoo akka nuu beeksiistaan jechuun guyyaa 24/03/2016 mormiin isaan ittii fufee oleera.
Aanaa sibuu sireettiis keessaattii akkasumaas mormiin ittii fufee jira. sababiin mormiin isaan hidhamuu B/SAA Qana’aa Raggasaa achii buteen isaan dhibuudha.bakka buustanii nuu fida,yoo ni du’e ta’e maatii isaan fi uummataa naannoo beeksiisa,yoo jira ta’e mana murtiittii haadhiyyatuu jechuun mormiin isaanii guyyaa gaaffaa 24/03/2016 ittii fufee oleera.
sababaa mormii kanaan agazii 1 miidhamee mana yaala Naqamteettii yaalamaa jira. humnoonii mootummaa tarkanfii suukaneessa fudhataniiru.
HB:-wa’ee gargaarsaa meeshaa irra deedebiinee isiin gaafaanuu hojjii keenyaa irrattii laafiin Giddaa fideeraa waan ta’eef adaraa atattamaan deebii gaha akka nuu laataan maaqa qaabsoo uummataa oromoon isiin gaafaana.
Injiifanoon uummataa OROMOOF!!!
Qeerransa dhihaa on March 26, 2016 at 11:12 am said:
Obboo Maammoo Baqqalaa (daldaalaa ykn inveesteerii) magaalaa Naqamtee keessaa humnootaa waraanaan qabamee hidhamee achii buteen isaan dhibameera.
Obboo Alamaayyoo Tasfaayee (ogeessaa fayya) Aanaa Giddaa ayyaanaa keessaa bakka ambaa-asiiri jedhamu qabamee mana hidhaattii dabatamee jira. halkaan eddaa(25/03/2016) dhukkasa sababaa tokko malee ABO galee jechuun sodaa irraa kan ka’e magaalaa Naqamtee keessaa adeemanii dhukkasaa bulaan.
kanaafuu qeerroon BIYYAA keessaa fi ala yeroon murteessadha waan ta’eef waayaneen naasuun raafamaa jirttii waan ta’eef haajabanu.
Qeerransa dhihaa on March 27, 2016 at 11:23 am said:
G/W/B/Aanaa Limmuu Galiilaa keessaa sababaa wajjiirii gandaa meexii mi’oo gubachuun namoon humnootaa wayyanee hidhamaan dararraan fi reebichii irraa gaha jiru maaqaan isaanii akka kan gadittii ibsameera.
29.Abarraa Yaadataa kan ta’an mana pooliisii Aanaa saanattii dararraamaa jiru.
Qeerransa dhihaa on March 31, 2016 at 1:13 pm said:
G/w/B/Aanaa Giddaa ayyaanaa keessaattii bakka bishaan mokonnon jedhamuuttii basaastootaa nama lama 1. Mulatuu Abeetuu fi 2 .Teezeeraa Asfaaw kan jedhaan irrattii humnootaa addaan guyyaa gaaffaa 30/03/2016 tarkaanfiin du’a irrattii fudhatameera.
Aanaanumaa kan keessaattii bakka Dongooroo mutaa fi Biribiirsaa jedhamuuttii Alaabaa ABO guyyaa lamaaf 27_29/03/2016 faniifamee oleera.
Guyyaa haara 31/03/2016 magaalaa Naqamtee keessaattii m/b Dargee sadarkaa 2ffaa fi kaatoolkiin mormii isaan yeroo isaan dhageessuu jaqabaaniitii humnoonii mootummaa agaziin gaasii nama imimmaneesuuf tarkaanfii reebichii humnaa olii irraattii fudhataniiru.akkasumaas nama nagaa karaa irrattii reebuu ittumaa fufaanii jiru.
Goota biyyaa on March 31, 2016 at 1:16 pm said:
Goota biyyaa on April 1, 2016 at 8:23 pm said:
G/W/B/Aanaa Limmuu Galiilaa keessaattii sababaa wajjiirii gandaa meexii mi’oo gubachuun namoonii wajjiiraa pooliisii Aanaa sanaatti hidhamaanii galgaalsa ganama reebichii fi dararraan cimaan irra gaha jira. isaaniis:-
1. Araguu Dhinsaa
2 Ayyalaa Dabaaloo
3 Garramuu Dabaaloo
4. Lammaa Jallataa
5. Dammisoo Ayyalaa
6. Addunyaa Birhaanuu
7. Ayyalaa Mosiisaa
8. Baqqalaa Fulaasii
10 Silaashii Naggarii
11. Galataa Jabeedsaa
12. Waaqjiiraa Ayyaanaa
13. Qeenatee Garbas
14. Lammii Jallataa
15. Tasfaa Margaa
16. Birhaanuu Baqqalaa
17 Mosiisaa Daayyaasii
18. Jira Kabbee
19. Abarraa Yaadataa. kan jedhamaan mana hidhaattii hiirarfamaa jiru.
Kan maalees B/SAA TAASFAAYEE DABAALEE kan jedhamu Waaggotaa 25f ABO jedhanii mana hidhaattii dararraamaa ture hangaa hojii irraa arii’an maatii isaa rakkinaa Guddaa irraan gahaniiru.
yeroo hamma immoo magaalaa Naqamtee keessaa m/b dhunfaa ANSAARII Keejii fi sadarkaa 1ffaa osoo barsiisaa jiru guyyaa gaaffaa 26/03/2016 qabamee bakka isaa buusaan waan walalameef maatii fi hawaasii naannoo yaddoo Giddaa keessaa jira.
Qeerransa dhihaa on April 1, 2016 at 8:26 pm said:
Qeerransa dhihaa on April 4, 2016 at 8:11 pm said:
G/W/B/A/Eebbantuu magaalaa Qeeloo keessaattii miliishootaa magaalaa kan ta’an 1.Dammarraa Kabaddaa (daldaalaa)
2.Gammachuu Anbaasaa (qotee bulaa) kan ta’an agaazii fi pooliisii fedeeraalaa karaa argiisiisuu uummataa reebsiisaa fi rakkisaa waan tuaniif yeroo hundumaa uummanii gorsaa fi uummataa duukaa hirirraa yeroo jedhamuun waan diidaniif tarkanfiin irrattii fudhatameera .
gochaa isaan kan irra deebii’uu waan diidaanii fi uummanii guyyaa gaaffaa 03/04/2016 galgaalaa tarkanfiin qabeenyaa (suuqii fi mana jireenyaa) akkasumaas isaan lachaan irrattii fudhateen miidhaa cimaan irraa gahee mana yaalaa seenanii yaalamaa jiru.
Achumaa Wallaggaa baha Aanaa waayyuu xuqaa magaalaa cindii bakka gabaa sanbataa jedhamuuttii humnootaa addaan konokoolataa wal- harkiisuu mii’aa inni batee adeemuu hundaa wajjiin boji’aaniiru.
kan biroon immoo bankii daldalaa Itiyoophiyaati distiriktiin Naqamtee abbootiin qabeenyaa qarshii Ol kaa’atan baajetaaf qarshii finee waan jituuf eenyuu illee qarshii 10,000 ol baafachuu akka hin dandeenyee beeksiisaniiru.
Qeerransa dhihaa on April 6, 2016 at 2:33 pm said:
G/W/B/Aanaa Diggaattii guyyaa gaaffaa 1/04/2016 wal-ga’ii opdo geggeefamee irrattii bulchaan Aanaa Diggaa ULFINAA SHIFARRAA kan dubbatee b/soota hidhuudhaan nagaa arganaa malee nagaa argachuu hin dandeenyuu hamma iyyuu isaanii hidhuun nageenyaa argaanee jedhaanii b/soota irrattii dhadachaa jira.
sababaa kanaan guyyaa gaaffaa 05/04/2016 b/saa m/b/sadarkaa 2ffaa Ifaa kan ta’e b /saa Garrummaa Abeetuu osoon inni hojii idilee isaa hojjechaa jiru sababaa tokko malee qabanii mana pooliisii Aanaa Diggaattii hidhamee dararraa irraan gaha jiru.
Qeerransa dhihaa on April 9, 2016 at 10:52 am said:
G/W/B/Aanaa Nuunnuu Qunbaa keessaattii bakka magaalaa Adaree jedhamuuttii humnoonii addaan ijaaramaan ( sababaa gargaarsaa dhabbuun baay’ee rakkachaa jiru waan ta’eef furmataa atattamaa akka nuu gotaan) maqaa qabsoo oromoon cimsiinee isiin gaaffana
humnoonii kun kanaan duraa hojii boonsaa kan hojjeetaan keessaa magaalaa Adaree keessaattii meeshaa agazii fi pooliisii irraa booji’anii hojii nama boonsuu hojjeetaniiru
Leave a Reply to goota biyyaa Cancel reply